တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါနိုင်ငံ Press Council အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၀
နပွေညျတျော၊ ဖဖေျောဝါရီ ၂၁
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ နီပေါနို ငျငံ Press Council ဥက်ကဋ်ဌ Mr. Kishor Shrestha ဦးဆောငျသော အဖှဲ့ဝငျမြားအား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲဝငျးဦးနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး နီပေါနိုငျငံ Press Council ဥက်ကဋ်ဌ နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ နီပေါနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Bhim K. Udas နှငျ့ နီပေါနိုငျငံ Press Council အဖှဲ့ဝငျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံသတငျးမီဒီယာကောငျစီအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအုနျးကွိုငျ (ဟံသာဝတီ ဦးအုနျးကွိုငျ)ဦးဆောငျသောအဖှဲ့ဝငျမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နီပေါနိုငျငံနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတို့သညျ ကိုးကှယျသညျ့ဘာသာနှငျ့ နောကျခံသမိုငျးကွောငျးအရ မြားစှာတူညီမှုရှိပွီး မိတျဆှရေငျးနိုငျငံမြားဖွဈကာ ဆကျဆံရေး တိုးတကျကောငျးမှနျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ယခုနှဈတှငျ နှဈနိုငျငံသံတမနျဆကျဆံမှု နှဈ(၆၀)ပွညျ့မွောကျမညျဖွဈပွီး ကဏ်ဍပေါငျးစုံတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ဆကျလကျ ဆောငျရှကျသှားမညျ့အခွအေနမြေား၊ နီပေါနိုငျငံ၏ ခတျေအဆကျဆကျ နိုငျငံရေး ပွောငျးလဲဖွဈပျေါမှုမြားတှငျ သတငျးမီဒီယာစာနယျဇငျးတို့၏ အခနျးကဏ်ဍ၊ သတငျးမီဒီယာ သညျ မဏ်ဍိုငျကွီးတဈရပျအဖွဈ တိုငျးပွညျတညျဆောကျရေးတှငျ တိုငျးပွညျနှငျ့ အမြိုးသားရေးအတှကျ အကြိုးဖွဈစနေိုငျသော အဓိကတှနျးအား တဈရပျဖွဈသညျ့ အခွအေနမြေား၊မွနျမာနိုငျငံတှငျ နီပေါအနှယျဝငျ ဂျေါရခါးလူမြိုးမြား ယခငျကတညျးကပငျ နထေိုငျခဲ့ပွီး တပျမတျောတှငျလညျး ရဲစှမျးသတ်တိနှငျ့ ပွညျ့စုံသော စဈသညျမြားပျေါထှကျခဲ့ကာ လကျရှိတှငျလညျး အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီး အရာရှိ၊ စဈသညျမြား သစ်စာရှိစှာ တာဝနျထမျးဆောငျ လကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နီပေါနိုငျငံနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတို့တှငျ ပွညျတှငျးပဋိပက်ခမြား မြားစှာကွုံတှခေဲ့ရသညျ့ နောကျခံသမိုငျးကွောငျးမြားနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ သတငျးမီဒီယာကဏ်ဍ ဆကျဆံရေး ပိုမိုတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ တပျမတျောနှငျ့ သတငျးမီဒီယာမြားအကွား ထိတှဆေ့ကျဆံဆောငျရှကျလြှကျရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျမှုကဏ်ဍ၊ ခရီးသှားကဏ်ဍမြားတှငျ ဘကျပေါငျးစုံမှ တိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျရာတှငျ မီဒီယာမြားမှ ပံ့ပိုးကူညီဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ နီပေါနိုငျငံ Press Council ဥက်ကဌတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
ထို့နောကျ နီပေါနိုငျငံ Press Council ဥက်ကဌနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ သူရဲကောငျး ဗိမာနျ(နပွေညျတျော)သို့ သှားရောကျ၍ နိုငျငံတျောနှငျ့ တပျမတျောအတှကျ အသကျ စှနျ့လှတျခဲ့ရသူမြားအား ဂုဏျပွုပနျးခွငျးခကြာ အလေးပွုခဲ့ကွကွောငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျရှိနစေဉျအတှငျး တနျခိုးကွီးဘုရားမြားအားဖူးမွျောကွညျညိုခွငျးနှငျ့ အထငျကရ နရောမြားသို့ သှားရောကျလလေ့ာလညျပတျခွငျးမြား ပွုလုပျသှားမညျဖွဈသညျ။
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် နီပေါနို င်ငံ Press Council ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Kishor Shrestha ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်များအား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး နီပေါနိုင်ငံ Press Council ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Bhim K. Udas နှင့် နီပေါနိုင်ငံ Press Council အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအုန်းကြိုင် (ဟံသာဝတီ ဦးအုန်းကြိုင်)ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နီပေါနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းအရ များစွာတူညီမှုရှိပြီး မိတ်ဆွေရင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကာ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ယခုနှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံမှု နှစ်(၆၀)ပြည့်မြောက်မည်ဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများ၊ နီပေါနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုများတွင် သတင်းမီဒီယာစာနယ်ဇင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ သတင်းမီဒီယာ သည် မဏ္ဍိုင်ကြီးတစ်ရပ်အဖြစ် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးတွင် တိုင်းပြည်နှင့် အမျိုးသားရေးအတွက် အကျိုးဖြစ်စေနိုင်သော အဓိကတွန်းအား တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် အခြေအနေများ၊မြန်မာနိုင်ငံတွင် နီပေါအနွယ်ဝင် ဂေါ်ရခါးလူမျိုးများ ယခင်ကတည်းကပင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်တွင်လည်း ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသော စစ်သည်များပေါ်ထွက်ခဲ့ကာ လက်ရှိတွင်လည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အရာရှိ၊ စစ်သည်များ သစ္စာရှိစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နီပေါနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများ များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍ ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်မတော်နှင့် သတင်းမီဒီယာများအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ၊ ခရီးသွားကဏ္ဍများတွင် ဘက်ပေါင်းစုံမှ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မီဒီယာများမှ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါနိုင်ငံ Press Council ဥက္ကဌတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် နီပေါနိုင်ငံ Press Council ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သူရဲကောင်း ဗိမာန်(နေပြည်တော်)သို့ သွားရောက်၍ နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်အတွက် အသက် စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသူများအား ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းချကာ အလေးပြုခဲ့ကြကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်း တန်ခိုးကြီးဘုရားများအားဖူးမြော်ကြည်ညိုခြင်းနှင့် အထင်ကရ နေရာများသို့ သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ဖလား၊ တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့်
ဇန်နဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထီးလိုမင်းလိုဘုရားကြီး အထက်ဌာပနာတော်သွင်းလှူခြင်း၊ စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နား တော်၊ ရွှေထီးတော်တင်လှူပူဇော်ပွဲနှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေက အနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြည်ညို
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတက်ရောက် (ရုပ်သံသတင်း)